DHAGEYSO: Maxa Sabab u ah dib u dhacyada badan ee ku yimid Shirka dib u heshiisiinta Galmudug? goormee ayuu ugu dambeyn uu furi doonaa?! | HalQaran.com
Home Wararka Maanta DHAGEYSO: Maxa Sabab u ah dib u dhacyada badan ee ku yimid...
DHAGEYSO: Maxa Sabab u ah dib u dhacyada badan ee ku yimid Shirka dib u heshiisiinta Galmudug? goormee ayuu ugu dambeyn uu furi doonaa?!
Dhuusamareeb (Halqaran.com) – Waxaa magaaladda Dhuusomareeb ee caasimadda Galmudug ka socda qaban qaabadii ugu dambeysay ee shirka dib u heshiisiinta maamulkaasi, waxaana kawada qeybgalayaan beelaha ku midoobay dhismaha dowlad goboleedkaas.
Guddoomiyaha kooxda gacanta ku haysa kulankaasi oo loo qorsheeyay in uu socdo 10 illaa iyo 5 casho, Cabdiraxmaan Baadiyow ayaa waxaa uu ka warbixiyey halka ay wax u marayaan iyo ujeedooyinka laga leeyahay shir waynahani.
Dr Cabdiraxmaan Baadiyow oo wareysi siiyey laanta Af Soomaaliga ee VOA-da ayaa waxa uu daboolka ka qaadey in mid kamid ah ujeedooyinka laga leeyahay shirkan ay tahay in uu kasoo baxo shaacin ah in dib loo dhisayo Galmudug.
Arrintan oo ay dabin khatarteeda leh ayaa waxay meesha ka saareysaa dhammaan mas’uuliyiinta Galmudug ee haatan jira, taasi oo dhabaha u xaareysa in xukuumadda ay si buuxda ula wareegto maamulka.
Shirka dib u heshiisiinta kadib, ayaa waxaa xigi doona mid kale, kaasi oo lagu wado in looga doodo awoodaha awood qeybsiga beelaha, kadibna lasoo xulo Xildhibaanadii dooran lahaa madaxda cusub ee hoggaamin doonta maamulka Galmudug.
awood qeybsiga qabiilada
Dib u dhacyada
shirka dib u heshiisinta beelaha Galmudug